Ihe PlayGalaxy Link nke Samsung dị ugbu a na gam akporo na Windows | Gam akporosis
Samsung na-ebupụta ngwa egwuregwu PlayGalaxy Link gụgharia na ngwa gam akporo na Windows
Samsung na-agbasi ike ma ugbu a ọ nwere naanị gosiputa egwuregwu ya na-egwu egwu a na-akpọ PlayGalaxy Link maka gam akporo na Windows. O yiri ka ọ kpebisiri ike ịnwe usoro abụọ a dị ka ike ya iji weta ahụmịhe dị oke mma dịka ọ na-eme na Samsung Dex na Note10; echefula vidiyo ebe anyị na-egosi gị otu esi eji ya.
Ebumnuche na ebumnuche nke PlayGalaxy Link bụ na ị nwere ike kpọọ egwuregwu PC gị na ekwentị Galaxy gị si ebe obula. N'ezie, mgbe o webatara Nkọwa 10, ọ webatara usoro ihe nkiri a na-asọ asọ, yabụ ọ bụ oge tupu ọ rute n'akụkụ ndị a.
Ugbu a weebụ Playgalaxy.com dị ndụ na ngwa gam akporo dị maka nbudata. Dabere na weebụsaịtị ahụ, ọ na - enye gị ohere ijikọ PC gị karịa WiFi ma ọ bụ data mkpanaka wee si otú ahụ na-asọba ọbá akwụkwọ egwuregwu gị na ekwentị Samsung ma ọ bụ mbadamba gị.
Ọrụ na-enye nkwado maka mpụga ọkwọ ụgbọala, òké na kiiboodu. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, anyị na-adụ gị ọdụ igwu egwu nke ọma na akụkụ ndị a karịa iji ihuenyo mmetụ aka, nke a na-akwado, mana anaghị enye otu ahụmịhe egwuregwu ahụ.
Ihe ahụ na-arụ ọrụ n'ụzọ dị otú ahụ mgbe ịdenye Windows 10 PC na ngwa ahụ na ị na-eji otu njikọ LAN, ị ga-enwe ike igwu egwuregwu gị site na PlayGalaxy Link. Anyị na-ekwu maka ọrụ zuru oke nke anyị nwere ike iji kpọọ egwuregwu ndị ahụ niile anyị zụtara na Steam ma ọ bụ na Epic Games na-echekwa onwe ya; nke n'agbanyeghị na-enye mmadụ n'efu kwa izu.
na chọrọ bụ:
NVIDIA GPU GTX 1060 ma ọ bụ ka mma, AMD Radeon RX550 ma ọ bụ karịa
CPU: Intel Core i5 ma ọ bụ karịa
Ebe nchekwa: DDR4 8g
AP: Gigabit rawụta
Anyị na-eche ihu a PlayGalaxy Link nke dị na beta na na n'oge a bụ naanị dị na United States na Korea. Ọ bụ ezie na ịnwere ike ibudata ngwa Windows site na njikọ ndị dị n'okpuru na nke APK nke PlayGalaxy Link adịghị efu.
Njikọ - Budata njikọ PlayGalaxy maka Windows
Njikọ - Budata ngwa nke PlayGalaxy Link
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Samsung na-ebupụta ngwa egwuregwu PlayGalaxy Link gụgharia na ngwa gam akporo na Windows
Beat Shift 3D bụ onye ọhụụ ọhụụ na-adịghị agwụ agwụ na-agba ọsọ na ọkwa ejiri aka mee
PUBG Mobile na-ekwupụta Ọnọdụ Payload New: Anyị Ga-eji Ndị Na-ebugharị Rọketị? Anyị ga-efe helikọpta?